Su'aal: Maxa keena dhiig iyo dheecan ka yimada gabadh uur leh?
Author Topic: Su'aal: Maxa keena dhiig iyo dheecan ka yimada gabadh uur leh? (Read 6253 times)
« on: October 21, 2016, 11:54:47 AM »
Waxan ahay uur 15 week's waana uurki u horeyay. laba week ka hor waxan isku arkay dhiig waxan aaday Doctor wuxuna iso siyay Duphaston 10mg. Kadib waxan ku noqday doctor wuxuuna yidhi ilmuhu wuu fiican yahay.
Markan laba ama sadex cisho joogo waxan isku arkaa qoyaan buni ah wax ur ahna malaha oo hal Mar aan isku arko markiibana taga
Markaa maxaa keeni kara dhecaanka?
Re: Su'aal: Maxa keena dhiig iyo dheecan ka yimada gabadh uur leh?
« Reply #1 on: October 27, 2016, 03:17:55 PM »
Wuxuu noqon karaa dilanka nooca loo yaqaano "Threatened Abortion" taasoo macnaheeda ah, dilan aan dhameestirnayn, hooaydane ay ka badbaadi karto, waxaad u baahan tahay nasiino dhameestiran oo aadan sariirta ka soo dagaynin, dhakhtarkane joogto ula xiriirtid.
Waxaa kaloo suuragal in infekshan jiro, khaasatan haddii dheecaanka aad isku aragtay inta dhiiga uusan bilaaban, dhabar xanuunne uu la socday ama xanuunka aad horay iskugu ogayd.
Taldayda waa in aad nasataa oo aadan culeys qaadin, socodka badan xadid, hadduu sii socdo ku laabo dhakhtarka.
Akhriso qoraal ku saabsan dilanka: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=1083.0
Views: 24426 March 10, 2012, 02:33:13 PM
Views: 21275 June 16, 2009, 10:44:01 PM
Views: 21009 February 15, 2016, 05:22:18 PM
Views: 9888 February 06, 2016, 03:31:04 PM
Views: 7351 March 26, 2016, 02:29:50 PM